Dadka: Jordyn Woods waxay soo bandhigaysaa saaxiibkeed cusub - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Dadka: Jordyn Woods wuxuu soo bandhigayaa saaxiib cusub
Dadka Dadka, waxyaabaha waxay umuuqdaan kuwo aad ufiican Jordyns Wood. Dhaleeceynta iyo aflagaadada ay la kulantay ka dib markii ay galmo la sameysay Tristan Thompson, oo ay horey u ahayd Khloe Kardashian, ayaa wali gadaasheeda ah. Iyo Kylie Jenner sidoo kale, maadaama Jordyn hadda ay leedahay BFF cusub.
Jordyn Woods si fiican ayey u socotaa ka dib saaxiibtinimadiisa nasashada isaga iyo saaxiibkiisii ​​ugu fiicnaa Kylie Jenner : Qandaraaska Model, ka soo muuqashada filimada caanka ah iyo hadda saaxiib cusub oo fiican!
Runtii, haddii Kylie Jenner si dhaqso leh ayuu u badalay Jordyn noloshiisa, kan dambe wuxuu sameeyay isla sidii isagoo u soo dhowaanaya Megan Thee Stallion, rapper cusub 24 sano oo dhaawici doona Mareykanka waqtigaan. Iyadu iyo Jordyn waxay wada sheekaysteen wax ka badan bil, laakiin dhowaan waxay go’aansatay inay arrimaha si rasmi ah uga dhigto.
Sidaas darteed, bartiisa Instagram-ka, ayuu Jordyn ku dhajiyay sawir uu ku soo qoray bartiisa twitter-ka ee BBF: "Megan Thee Stallion waa saaxiibkayga cusub ee ugu fiican". Waagaas wixii ka dambeeyayna, labada hablood ee saaxiibbada ah weligood midba midka kale iskama tago.
Xanta waxay wada joogeen fasax dhowr toddobaad ka hor waxayna fursad u heleen inay ku dhejistaan ​​sawirro qaarkood oo ku guuldareystay inay ka farxiyaan taageerayaashooda.
Choco saaxiibtinimo! Bogga Kylie Jenner wuxuu umuuqdaa mid runti ah inuu xiranyahay nolosha Jordyn, Wanda People.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.jewanda-magazine.com/2019/09/people-jordyn-woods-presente-sa-nouvelle-meilleure-amie/
"Amakaag", "layaab leh", "Farshaxanka riyada": Anthony Colette dithyrambic on Iris Mittenaere buugiisa